Blasting Machine & Spare Zvikamu fekitori, vatengi - China Blasting Machine & Spare Zvikamu Vagadziri
Kuburitsa kunogona kuitiswa zvakananga mumidziyo dzakasiyana kana pane bhanhire rekutakura.Roller conveyor yakapfura blast muchinaanoshandiswa kudzika uye kubisa profiles, machira uye kunyepa. Uchishandisa muchinjiko wekutakura, chinotenderera chinotakura sisitimu inogona kubatanidzwa neayo ega matanho matanho, akadai sekuputika, kuchengetedza, kucheka uye kuchera.
Pamusoro pechitima kupfura-kuputika michinaakakodzera akasiyana siyana ekushandisa. Iwo zvidimbu zvebasa zvakasungirirwa nemaoko kana kuiswa pasi. Iyo yekuputika maitiro inogona kuitiswa nenzira yakanaka nekushandura iyo yekutenderera nzira uye nekukanganisa kweanosungirirwa pamberi pema turbine.
Iyo kuputika kwemavhiri kunyanya inosanganisira cage keji, mashizha, anochengetedza mahwendefa, main shaft, kumhanya kumhanya kurovera, bhandi vhiri, bhandi, kumisikidza mudziyo, uye mota naizvozvowo motor base etc.
Hanger mhando yakapfura blast muchina iri pakati pemhando dzakapfava dzemidziyo yekuputika. Ivo anoshandiswa kubvisa ngura, chiyero, jecha uye mabhureki kubva kumarudzi mazhinji emabasa zvidimbu.Hanger mhando yakapfura blast muchina anoshandiswawo kupedzisa kuputika kwekunetseka kwezvidimbu zvebasa kana kumisidzana basa chidimbu cheparutivi rwekupedzisira kupfeka.
Iyo tumble blast dhizaini inogamuchirwa kwakawanda seimwe yeanonyanya kuita mabhora maitiro ekubvisa chikero, ngura uye burrs kubva muzvikamu zvekugadzira zvakawanda. Iyotumble blast muchina's risingaperi rabha bhandi zvinyoronyoro rinotenderera zvidimbu zvebasa uye zvakaenzana rinovafumura kune inorwadza rukova rweyese nguva yekuputika.
In Drum mhando yakapfura blast muchina zvidimbu zvidiki zvebasa zvinoputika sezvinhu zvakawanda. Nekudaro dzinogona kushandiswa mumitsara yekugadzira kana yekumira-yega masisitimu.